सुनको मूल्य वृद्धि, कति पुग्यो तोलाको ! - लोकसंवाद
सुनको मूल्य वृद्धि, कति पुग्यो तोलाको !
काठमाडौ । स्थानीय बजारमा पहेंलो धातुको मूल्यमा आज सामान्य सुधार भएको छ । अघिल्लो सातादेखि ओरालो लागेको सुनको मूल्य आइतबार पनि ओरालो नै लागेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजका लागि तय गरेको मूल्यसूचीअनुसार सुन तोलामा ४०० ले उकालो लागेको छ । प्रतितोला ८८ हजार ३०० मा आइतबार कारोवार भएकोे छापावाला सुन आज भने ८८ हजार ७०० मूल्य कायम भएको छ ।
त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य आइतबार प्रतितोला ८७ हजार ८५० हजारमा कारोवार भएकामा आजका लागि ८८ हजार २५० कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ । तोलामा एक हजार ३२५ मा आइतवार कारोवार भएको चाँदी आजका लागि भने पाँचले वृद्धि भई एक हजार ३५० मूल्य निर्धारण भएको छ ।